कहाँ छन् नरेन्द्र उर्फ अयुब खान ? - inaruwaonline.com
कहाँ छन् नरेन्द्र उर्फ अयुब खान ?
प्रकाशित मिति: बिहिबार, माघ २०, २०७३ समय: ३:५६:१९
काठमाडौं, २० माघ । उनी ३० वर्षसम्म कहाँ थिए, के गर्दै थिए घरपरिवार कसैलाई पत्तो थिएन । तीन महिनाअघि उनी अचानक फेला परे ।
फेसबुकमा आफ्नो जन्मथलो र परिवारबारे लेखेका उनलाई त्यही स्टाटसले घरपरिवारसम्म सम्पर्कमा पु¥यायो । घरपरिवार, साथीभाई सबै खुसी भए ।३० वर्षअघि हराएको आफन्त पाकिस्तान–अफगानिस्तान सीमाक्षेत्रमा सकुशल रहेको र छिट्टै घर आउन चाहेको थाहा पाउँदा परिवारमा हर्षको सीमै रहेन ।
तर, त्यो खुसी धेरै दिन टिक्न सकेन ।घरबाट बेपत्ता बनेर ३० वर्षपछि परिवारको सम्पर्कमा आएका बैतडी, हटैराज–२ का नरेन्द्रबहादुर चन्दको अवस्था फेरि अज्ञात भयोे । फोनमार्फत परिवारको सम्पर्कमा आएका उनी गत पुस ११ देखि सम्पर्कमा छैनन् । उनको फेसबुक अकाउन्ट पनि सक्रिय देखिन्न ।
पाकिस्तानी सुरक्षा निकायले उनी बसोबास गर्दै आएको बलुचिस्तानबाटै पक्राउ गरेको भन्ने सूचना पाएपनि पुष्टि हुन नसकेको आफन्त बताउँछन् ।पाकिस्तान–अफगानिस्तानको युद्धरत क्षेत्र बलुचिस्तानको चमनमा आफू रहेको जानकारी चन्दले केही महिनाअघि फोनबाट गराएका थिए ।आजको नागरिक दैनिकमा खबर छ।